RASMI: Ronaldinho Oo Xorriyaddiisa Dib U Helay Kaddib Lix Bilood Oo Uu Ku Xidhnaa Paraguay - Gool24.Net
RASMI: Ronaldinho Oo Xorriyaddiisa Dib U Helay Kaddib Lix Bilood Oo Uu Ku Xidhnaa Paraguay
Xiddigii hore ee xulka qaranka Brazil iyo kooxda Barcelona ee Ronaldinho ayaa laga sii daayay xabsi guri uu ugu xidhnaa waddanka Paraguay, halkaas oo uu ka baxay markii uu dhamaystay muddadii xabsiga isla markaana uu shubay ganaax lacageed.
Ronaldinho oo ay da’diisu tahay 40 jir iyo walaalkii Roberto Assis ayaa bishii March jeelka la dhex-dhigay markii ay Paraguay ku galeen baasaboor been abuur ah, waxaana muddo bil ah oo ay ku xidhnaayeen jeel weyn oo caasimadda dalkaas ku yaalla ay lasoo derseen nolol aanu laacibkan hore waligii ku fikirin.
Ronaldinho ayaa lagula xidhay jeelka gaangistaro, budhcad daroogada ka ganacsata, dad soo dilay dad kale iyo siyaasiyiin magac leh oo loo hayso dembiyo, waxaana muuqaal lagaga duubay jeelka dhexdiisa lagu arkay isaga oo kubbad la ciyaaraya maxaabiista.
Xiddigan labada jeer ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or ayaa bishii April bixiyey lacag dhan $1.6 milyan oo dollar oo damaanad ah si looga soo saaro jeelka oo loogu beddelo xabsi guri, waxaana uu kiraystay hotel ku yaalla magaalada Asuncion oo isaga u xidhnaa intii uu dhamaysanayay muddada xabsigiisa, ciidamaduna dusha sare ka ilaalinayeen.
Ronaldinho iyo Roberto Assis oo ah walaalkii oo ka weyn ayaa ugu dambayn xabsiga kasoo baxay, waxaase laga qaaday lacag ganaax ah oo dhan $200,000 dollar oo lagu tilmaamay khasaarihii ay geysteen. Ronaldinho ayaa laga qaaday $90,000 halka Assis uu bixiyey $110,000.
Roberto Assis ayaa la sheegay inuu kusii jiri doono liiska dambiileyaasha Paraguay oo aan laga saari doonin, isla markaana ay daba socon doonto arrinta ah inuu yahay qof dembi ka galay dalkaas, balse xiddiga hore ee Barcelona, AC Milan iyo PSG ee Ronaldinho ayaa laga tirtirsay liiska dadka dembiyada ka galay dalkaas.
Waxa kale oo Assis lagu xukumay in aanu muddo laba sannadood ah ka dibedda uga bixi karin waddanka Brazil, gaar ahaan magaalada Rio de Janeiro, taas oo muddada 24ka bilood ee soo socota aanu bannaankeeda gaadhi doonin.